Newsofexile.com: कलाकार केदार उप्रेतीसँगको वार्तालाप
वर्तमान समय कसरी विताउँदै हुनु हुन्छ ?
शिविर ब्यावस्थापन समिति अर्न्तगत प्रशासन विभागको प्रमुख एवं संयुक्त शान्ति समितिको कार्यकर्ता भएकोले समाजिक काममा ब्यस्त छु भने आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु ।
तपाईलाई दर्शकहरुले लेखक/निदेशक तथा नव नायकको रुपमा चिन्दछन् । शिविरभित्र रहेर कतिवटा चलचित्र निर्माण गर्नु भयो ?
संयुक्त लगानीमा तीनवटा र ब्यक्तिगत रुपमा दुइवटा गरि पाँचवटा निर्माण भएका छन् भने चारवटा लेखन र एघार वटामा आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गरिसकेको छु र थप गर्दै पनि छु । त्यसमा झुपडीको जिन्दगी, टुक्रिएको मुटु, भाग्यको खेल, नशा, अस्तित्वको लडाई आदि ।
The Pathetic Exile को खास - किन प्रदर्शन नगरेको ?
- हेर्नुहोस The Pathetic Exile एक मात्र भूटानीहरुको विगत, वर्तमान र भविष्यको इतिहास बोकेको यथार्थ एउटा दस्तावेज हो र यो अहिलेको अवस्थामा वाहिर निकाल्ने सहमाति छैन । पछि हामी प्रदर्शनमा ल्याउने छौं ।
आफैं नायकको भूमिकामा सानो तथा ठूलो पर्दामा निस्कँदा, लगानीपछि आम्दानी कस्तो रहन्छ ?
- भविष्य अन्यौल हुँदाहुँदै पनि डटेर लागि परिंदैछ, कला र कलाकारिताको संरक्षणमा निरन्तर संर्घष गरि रहेको छु तर लगानी अनुसार प्रतिफल नभएपनि दाम भन्दा नाम कमाइ राम्रो छ ।
नेपाली कथानक चलचित्र "अस्तित्वको लडाईं"मा भूटानी कथा ब्यथा समेटिएको छ ?
- खासै यस चलचित्रमा भूटानी कथाब्यथा चाहिँ छैन तर हामी कलाकारले नेपालको परिवर्तित समयमा देखेका कथा अनि लाखौं नेपालीले झेल्नु परेको एउटा नयाँ कथा मात्र छ । त्यसबाट नयाँ विचार निस्केको हुनाले भूटानमा पनि यस्तो लडाईं आवश्यक छ भन्दा फरक नर्पला ।
भूटानी कलाकारितालाई अब कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ होला ?
हुन त सबै सुरक्षित ठाँउमा पुग्नु भएको छ । प्रवासमा त पहिले देखि नै संरक्षण हुदै आएको हो र हामीले कलाकारिता सम्बन्धि ज्ञानगुण पाएर नै यस स्थानसम्म आइपुगेका हौं । कला र कलाकारिताको लागि कुनै पनि भुगोलले छेक्दैन भनिएको छ, जहाँ रहे पनि देशको लागि नभएपनि माटो र विश्वको लागि चाहि संघर्ष गरि सफलता कमाउने मेरो इच्छा रहेको छ ।
फिल्म निर्माणका लागि भावी योजना के कस्तो रहेको छ ?
भखर्रै मात्र विहानी कला केन्द्र अफ भूटानको विहानी नामक डकुमेन्ट्री निर्देशन गरिसकें भने अर्को पाँच मिनेटको रिफ्युजी डकुमेन्ट्रीको तयारीमा छु । यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको लागि तयार हुनेछ ।
अन्तमा तपाइका दर्शक तथा पाठकहरूका लागि केही केहि सन्देश छ कि ?
समुन्द्र, हावा र चरा अनि कालकारलाई कुनै पनि भुगोलले छेक्न सक्दैन त्यसैले हाम्रा सृजना, कला र सँस्कृतिलाई जहाँ रहे पनि भुल्नु हुँदैन । सदैव संरक्षण, सुरक्षा दिनु हाम्रोर् कर्तव्य हो र लुकेर बसेका प्रतिभालाई जहिले पनि अगाडि प्रस्तुत गर्नु पनि हाम्रो इतिहास र सँस्कृति जोगाउनु हो ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:45 AM